DVD gubi for Windows
1. DVD gubi for Windows 10
2. MP4 in DVD gubi for Windows 10
3. AVI in DVD gubi for Windows 10
DVD 4. Play on Windows 10
Kan sameeyey 5. DVD for Windows 10
6. Free DVD gubi for Windows
7. Rooti for Windows
8. gacan-jabis for Windows
Kan sameeyey 9. DVD iyo wax abuura u Windows 10
10. cajalid Software Gubidda for Windows
11. cajalid gubi for Windows 10
Wondershare DVD Creator Waa aalad xirfadeed oo ay isticmaalaan DVD gubashadii saaxiibtinimo. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u DVD la yaab leh la arrimo menu DVD dhisay-in, iyo in la abuuro slideshow fantastik ah la sawiro iyo music soo jeeda.
Waxaan og nahay in uunka DVD waxa uu noqday hawl adag sababta oo ah interface taas oo ka dhigaysa in ay adagtay in ay isticmaalaan. Laakiin halkan waxaad ka heli doontaa ugu fiican, xor ah oo si sahlan loo isticmaali qalab gubashadii DVD daaqado iyo siin farabadan oo ka mid ah qaababka ugu yar qasabno of mouse aad. Dhammaan qalabka hoos ku xusan waxaa is baaro xeeldheerayaasha iyo in dhamaadka waxaa ka mid ah ka dib, waxaan sidoo kale ku siinay 10ka talooyinka uu ka soo xusho.
Qeybta 1: Top 10 DVD Creators FREE ah ee Windows
Qeybta 2: Xulashada More ah Advanced & Professional DVD Creator
1. Windows DVD Kan sameeyey,
A saarka Microsoft ee isticmaala daaqadaha oo siinaysaa qaababka badan premium in wax ka bedel iyo abuuro DVD a video qurux badan. Waxay leedahay saami riteen marto si kor loogu qaado guriga sameeyey video galay filim Hollywood xirfad sida DVD. The gaare Windows DVD siinayaa muuqaalada dhameystiran si ay u abuuraan DVD ah sanamyadooda iyo videos wada iyo sanamyadii qorraxda iyo videos la diyaarin karaa sida ay u baahan user ee.
Baro wax badan oo ku saabsan Windows DVD Kan sameeyey >>
Premium A DVD Creator kaas oo si xor ah u soo bixi laakiin dhammaan muuqaalada oo user a pro u baahan tahay inaad wax ka bedel videos, sawirada si ay u abuuraan DVD ah la soo bandhigi karo. WinX DVD Author waa bilaash ah DVD Creator oo badalo karaa qaabab badan Video qaab DVD ku haboon. User ayaa sidoo kale ku dari kartaa cutubyada iyo subtitles in isaga / iyada video by qalab this. DVD WinX The Author sidoo kale abuuri tayo sare 4.3 G waa in ka yar 1 saac oo waa ka dhaqso badan daaqadaha kale DVD Creators ku salaysan.
3. DVD cirib
Haddii aad u baahan tahay software ah oo lacag la'aan ah oo si sahlan ay u isticmaalaan inay wax ka bedel iyo abuuro DVD dadaal yar, ka dibna DVD cirib waa fursad fiican oo aad dooqa. DVD cirib waa lacag la'aan si fudud loo isticmaali interface badan sifooyinka dadka isticmaala Windows. Software wuxuu ku siinayaa kala duwan oo qaabab video inay ka bedel iyo sidoo kale in ay gubi DVD la hal click iyo in waqti yar. Software ayaa sidoo kale qoreysa in la abuuro menu ee DVD in ay si fudud u helaan mid kasta file warbaahinta by DVD ciyaaryahanka.
Baro wax badan oo ku saabsan DVD cirib >>
DVD styler waa il software Open si ay u abuuraan xirfad DVD ee la qasabno oo kaliya dhowr iyo dadaal yar raadinaya. Waa software free taas oo ah files Media gubashada galay DVD. Styler DVD wuxuu ku siinayaa qaababka badan sida arrimo menu, la abuuro slideshow, iyo dar Cinwaan iyo audio badan kuwan raadkaygay. Waxa kale oo ay dajiyaan karaa sawirro wallpaper asalka ah menu u DVD ah. Waxa ay taageertaa nooc kasta oo ah video ama audio qaabab si ay u fuliyaan iyo iyaga nuqul ka galay DVD ee waqti yar. Iyo feature ugu soo jiidasho leh oo ku saabsan sida ugu fiican styler DVD ah waa in loo isticmaalo si files warbaahinta oo aan dib-u-Deji sida MPEG iyo files VOB ay qaataan waqti si ay dib-u-encode galay DVD File ah.
Baro wax badan oo ku saabsan DVD Styler >>
5. Video inay DVD Converter
Koyote jilicsan Free Video inay DVD Converter waa iska caadi ah laakiin software adag u abuurista DVD ee Home DVD ciyaaryahanka. Waa qalab sahlan oo dhakhso ah si loogu badalo video iyo si toos ah iyaga gubi galay DVD ah. Sida sida ay magaceeda ka dhabayso qaab video looga baahan yahay sida ugu per amarka user iyo video ay si toos ah DVD gubaa. In kastoo waxa uu leeyahay muuqaalada ka yar si ay edit iyo jar sida fursadaha laakiin weli waa software xoog leh DVD abuurkii in daqiiqo.
Badan oo ku saabsan Video Baro inaad DVD Converter >>
Star gubashada waa furan il qalab si xor ah u ah oo taageera dhamaan noocyada files DVD / VCD warbaahinta si ay u abuuraan bandhiga Video DVD nooc kasta oo ah qoraa DVD Player ama. Waxay taageero buuxda siinaysaa in aad ku darto nooc kasta oo file warbaahinta ama xogta ay gubaan galay DVD ah. StarBurn ayaa sidoo kale muujinta ah si ay u qoraan desktop iyo badbaadin video ah oo qaab la doonayo. Waa a abuure DVD ugu fiican oo lagu daray qalab gubanaya u isticmaala daaqadaha oo taageera oo dhan jir daaqadaha dambeeyay version sida xo daaqadaha 8.
Dheeraad ah ka baro Star gubi >>
DVD 7. Chocolate
Bombono DVD waa DVD qoraalka software u PC ee ay u abuuraan iyo DVD ee ku gubi doonaan dadaal yar oo si fudud u jiid iyo hoos u Habka. DVD Bombono The Taageerada Real WSIWYG editor menu la thumbnails nool oo u fudud in ay ku darto Cinwaan inay loox kasta oo video ah. Interface ayaa caado haddii software waa mid aad u fudud in ay u fahmaan kale ee uu qabtaa hawsha in waqti yar marka la barbardhigo abuuray kale DVD oo lacag la'aan ah.
8. Sothink DVD Movie Kan sameeyey,
A Al ka mid ah DVD qalab qoraalka, Sothnik DVD movie gaare siinayaa badan oo muuqaalada inaad la kaliya qasabno yar oo waxaad qurxisaan videos la caado ka dhigtay arrimo iyo saamaynta hidi. The video tafatirka gebi ahaanba bilaash ah iyo qalab gubanaya waa cabsi n noociisa oo kale oo ay leeyihiin feature gurmad u DVD ee ku. The Kan sameeyey Sothnik DVD waa tafatirka movie degdeg ah iyo qalab gubanaya. Waxaad si fudud ku qurxin kartaa videos la arrimo hidi ay u menu.
9. GMT DVD Kan sameeyey,
A qalab DVD gaare freeware waxaa loogu talagalay dadka isticmaala daaqadaha oo u eg yahay download iyo fududahay in la isticmaalo. Software waa wanaagsan yahay sida DVD gubi laakiin sifooyinka DVD tafatirka ma tahay badan oo ay u isticmaalaan. The Kan sameeyey GMT DVD qoreysa DVD wanaagsan in DVD Copy iyo DVD qaadashada image in nidaamka disk adag. Waxaad si fudud nuqul ka kartaa DVD ee la qalab iyo sidoo kale si fudud ayaa iyaga gubi in DVD kale.
Baro wax badan oo ku saabsan GMT DVD Kan sameeyey >>
Qalab daemon Tani waa software wanaagsan si ay u gubaan aad files Data in CD ama DVD. Sidoo kale arjigaan abuuri kartaa file DVD ama CD Image & badbaadin u * qaab .iso ama sida kale ee aad rabitaan. Qalabkani waxa uu awood u user in ay gurmad waxaa xogta gudbiyo files warbaahinta waxaa qaab image si ay u. Waxa kale oo aad file image in drives dalwaddii kala duwan ee dalka buuraha leh kartaa, si aad u isticmaali kartaa si aan CD ama DVD gubanaya image faylasha aad.
Baro wax badan oo ku saabsan Daemon Tools Lite >>
Qeybta 2: Xulashada More ah DVD gubi Advanced & Professional
Talinayo 1 : Wondershare Video Converter Ultimate
Waa aalad aad u awood badan in xallin karo dhibaatooyinka video la xidhiidha si hufan, sida DVD gubanaya, tafatir, diinta, duuban, qoraalana, hoorto, iwm
Talinayo 2 : Wondershare DVD Creator for Windows
Haddii aad dhabtii doonaysid aalad si ay u sameeyaan shaqaalaha aad videos dheeraad ah oo xirfad iyo qaabka Hollywood ka dibna waxaan ku talin doonaan Wondershare DVD Creator . Waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah in ka badan qalabka DVD gubashadii kor ku xusan oo dhan. Waxay leedahay arrimo badan oo hidi-aad DVD Menu. Geedi socodka Gubasho waa ka dhaqso badan sida aad ka filan oo aan marnaba la xayiran idiin noqon burbur aad DVD ee.
Taageerada gubanaya videos in ku dhowaad video kasta oo caan ah sida AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, iwm
Guba videos in DVD ah xirfad leh 40 + arrimo menu ugu fiican ee loogu tala galay.
Shakhsiyeeyo videos iyo arrimo menu u doonaya ka hor DVD gubanaya.
Samee slideshow sawir qosol badan si ay ula wadaagaan saaxiibada iyo qaraabada.
Sida loo Guba Video inay DVD la Wondershare DVD Creator for Windows (Windows 10 ka mid)
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda this Wondershare DVD gubanaya qalab, kaliya jiidi oo hoos u files si aad u codsiga, ama guji "Import" on interface ka.
Edit Video ama arrimo Menu
Riix ah "qalin" icon in arbushin ilaa video ah sixiddiisa uu furmo suuqa, ama guji tab Menu ku menu sare ee interface si aad u codsato oo lagu furdaamiyo iyo edit menu.
Guba Video inay DVD for Windows
Guji "Guba" badhanka hoose, oo aad ku doorato qaab DVD doonayo ka disc DVD, DVD folder iyo files ISO.
Just riix halkan si aad u hesho tilmaan-faahfaahsan oo ku saabsan Sida loo Isticmaalo Wondershare DVD Creator for Windows >>
Full tusmo u hagaagsan xiriir telefoonka Windows
> Resource > Windows > Top 10 Best gubidda DVD Bilaashka ah ee Windows